श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाली पक्ष तयार, फेब्रुअरीमा नेपाल भ्रमणमा जाने- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
मलेसिया — पटक–पटकको सरकारी पहलपछि अन्तत: मलेसियाली पक्ष नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न तयार भएको छ । नेपालले करिब एकदशक अघिदेखि श्रम सम्झौताका लागि मलेसियासँग पटक–पटक पहल गर्दै आएपनि यसका लागि दुईपक्षीय गहन छलफल हुन सकेको थिएन ।
‘श्रम सम्झौताका लागि धेरैपटक प्रयास भए तर द्विपक्षीय औपचारिक छलफलसमेत हुन नसक्दा यो विषय लम्बिएको थियो,’ मलेसियास्थित नेपाली राजदुत डा. निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले कान्तिपुरसँग भने, ‘औपचारिक रुपमा उहाँहरु छलफल गर्नका लागि नेपाल भ्रमणमा जानका लागि तयार हुनुभएको छ । अब दुवै प्रतिनिधिमण्डलबीच काठमाडौंमा छलफल हुन्छ ।’
तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धको मामलामा ‘श्रम सम्झौता’ लाई मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । नेपालले यसअघि सन् २००९ जुन महिनामा, दोस्रोपटक २०१० डिसेम्बरमा २८ र तेस्रोपटक २०१३ जुन महिनामा मलेसियालाई ‘मस्यौदा–प्रस्ताव’ पेश गरेको थियो ।
नेपालले गरेका प्रस्तावहरु यस्ता छन् :
१) कामदारको तलब कामदारकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने ।
२) नेपालबाट क्वालालम्पुर विमानस्थलमा आइसकेपछि रोजगारदाता ढिलो पुग्दा नेपाली कामदार अलपत्र पर्ने गरेकाले रोजगारदाताले ५/६ घण्टाभित्रै कामदार जिम्मा लिनुपर्ने ।
३) कामदार काम गर्ने समयमात्र नभई २४ सैं घण्टा लागू हुनेगरि बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । कारणवश कामदारको मृत्यु भएको खण्डमा १ लाख रिंगिटसम्मको बिमाको सुनिश्चित गराउनुपर्ने ।
४) करार अवधि २ वर्षे गर्नुपर्ने ।
५) मासिक न्युनतम तलब १२ सय रिंगिट बनाउनुपर्ने ।
६) दुई देशका अधिकारीहरु सामेल हुने गरी संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्ने ।
७) समयमै भिसा नवीकरण गराइदिनुपर्ने ।
८) करार अवधि थपिएपछि भिसा र सम्झौतापत्रको प्रतिलिपी दूतावासलाई समेत बुझाउनुपर्ने ।
९) कामदारको राहदानी कामदार आफैंले राख्न पाउनुपर्ने ।
१०) नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा योग्य भई आएका नेपाली कामदारको मलेसियामा पुन: परिक्षण गर्दा अयोग्य देखिएमा त्यसबापत कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने
प्रकाशित : पुस १४, २०७३ १७:१६
कृष्णनगरस्थित झण्डेनगर सीमामा भारतबाट गोली चल्दा दुई प्रहरी घाइते
पुस १४, २०७३ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — सीमा क्षेत्रको कृष्णनगर स्थित झण्डेनगरमा भारततिरबाट गोली चल्दा दुई प्रहरी घाइते भएका छन् । भन्सार नजिक खटिएका ईप्रका कृष्णनगरका हवल्दारद्वय कर्णबहादुर पुन र मोहन श्रेष्ठ घाइते भएका हुुन् । पुनको कुममा र श्रेष्ठको हातको औंलामा गोली लागेको छ । दुबै खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सीमा क्षेत्रको कृष्णनगर स्थित झण्डेनगरमा भारततिरबाट गोली चल्दा दुई प्रहरी घाइते भएका छन् ।
भन्सार नजिक खटिएका ईप्रका कृष्णनगरका हवल्दारद्वय कर्णबहादुर पुन र मोहन श्रेष्ठ घाइते भएका हुुन् । पुनको कुममा र श्रेष्ठको हातको औंलामा गोली लागेको छ । दुबै खतरामुक्त रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दिउँसो करिब दुई बजेतिर एयर गनको गोली प्रहार गरिएको बताइएको छ । घटनाको अनुसन्धान भइरहेको ईप्रका कृष्णनगरमा निरिक्षक बसन्त रिजालले बताए ।
एयर गनबाट गोली फायर गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पाइएको भन्सार राजस्व सशस्त्र प्रहरी गुल्मका नायव उपरिक्षक तारिखचन्द्र चौधरीले बताए ।
प्रकाशित : पुस १४, २०७३ १६:५७